के दिमागको केमिकल प्रक्रिया मात्र हो ‘प्रेम’ ?
बीबीसी । प्रेमको भावना हाम्रो दिमागका केही केमिकलमा निर्भर हुन्छन् । यस्तोमा धेरैले एउटा प्रश्न गर्ने गरेका छन् कि, समय अनुसार त्यो केमिकल कम हुँदै जाँदा के माया पनि हराउँछ ?
तापनि प्रेम विज्ञानले साचेजति सजिलो विषय भने होइन । किनकी यो भावना कुनै एउटा सुइ लगाएर उत्पन्न गराउन वा गायब पारिदिन सकिँदैन । जीवविज्ञानको तर्कले पनि यसको सही विश्लेषण असम्भव पारिदिन्छ । त्यसैले मायाप्रेम जटिल नभएको भए मान्छेले अहिलेको जति क्रान्ति नै गर्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसैले पनि प्रेमलाई केबल दिमागको केमिकल प्रक्रिया भन्न सकिँदैन ।
राँझा । कोरोनाभाइरस महामारी संक्रमणको केन्द्रविन्दु बनेको बाँकेमा अहिले अवस्था सामान्य भएको छ । यहाँका अस्पतालमा ७४ जना बिरामी मात्र... ९ मिनेट पहिले
कञ्चनपुर । महाकाली नदीको पानीको बहाव बढेसँगै कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१०, कुतियाकभर बैदीफाँटाका १५ घर डुबानमा परेका छन् । राति २ः४५... ५३ मिनेट पहिले